China Quick Coupler ifektri abakhiqizi | ZAILI
Kufakwa ishibhini ku-cab, futhi iphini yokuphepha ingafakwa ngokumane ucindezele inkinobho yokushintsha ku-cab. Ngakho-ke, inkathazo yokuphuma ekhumbini iyagcinwa. Ubuchwepheshe obusha bokuvula nokuvala iphini yokuphepha kutholakala ngokusetshenziswa kwesistimu yedrayivu kagesi ye-excavator, kune-hydraulic system. Ngakho-ke, ingcindezi kawoyela ebiza kakhulu ithathelwa indawo ugesi, osindisa izindleko ekukhiqizeni. Ekhumbini, umsindo ozenzakalelayo wophondo ungasetshenziswa ukuthola ukuthi ngabe ixhunyiwe yini. Endabeni yocingo oluphukile, ukuphepha kokuguqulwa kwesandla kungaqinisekiswa.
I-1, Idizayini yokuhlanganiswa kokusebenza: ukusebenzisa insimbi enamandla kakhulu ye-manganese kanye nokuhlanganiswa kwesakhiwo ukwakhiwa kwemishini, okuhlala isikhathi eside futhi kufanelekile kuzidingo zomhlangano zabavubukuli bamathani ahlukahlukene.
I-2, uhlelo lokuphepha oluzenzakalelayo ngokuphelele: Kufakwe iswishi kagesi ekhumbini ukufaka ingcindezi kawoyela ebiza kakhulu ngogesi, evumelana nokuthi umshayeli asebenze.
I-3, i-hydraulic control check valve kanye nemishini yokuphepha yokukhiya imishini ifakwe kwisilinda kawoyela ngayinye ukuqinisekisa ukuthi isixhumi esisheshayo singasebenza ngokujwayelekile lapho isifunda samafutha nesekethe kunqunyiwe.
I-4, Isixhumi ngasinye esisheshayo sinesistimu yokuvikela iphini yokuphepha ukuqinisekisa ukuthi isixhumi esisheshayo singasebenza ngokujwayelekile uma kwenzeka ukwehluleka kwesilinda sokuxhuma esheshayo futhi kudlala indima "yomshuwalense ophindwe kabili".
5, Ukuhlukahluka nokuhlukahluka
Ukwehluka kokuklanywa kwesixhumi kuqinisekisa ukuthi isixhumi esifanayo singasetshenziswa kumikhiqizo eminingi yabagibeli bethoni efanayo. Ngasikhathi sinye, ukuguquguquka kwesixhumi kuqinisekisa nokuxhuma okuhlukahlukene kufaka phakathi ama-grab, ama-rippers, njll.
Uhlelo lokuphepha oluzenzakalelayo ngokuphelele
Langaphambilini Inqwaba Yenqwaba
Excavator Coupler Quick
Hug Uhlobo umfutholuketshezi Coupler
Umfutholuketshezi Multi Coupler
Umfutholuketshezi Coupler Quick
Push Uhlobo umfutholuketshezi Coupler
Ukuthula Uhlobo Breaker, Pulverizer Ukuze Excavator, Shear Ukuze Excavator, Hb Series Breaker, Crusher Ukuze Excavator, Isilawuli Valve Ukuze Breaker,